नेपालमा सरकारले ल्यायो पढ्दै-कमाउँदै कार्यक्रमको अवधारणा, के छ योजना ? - Vishwanews.com
नेपालमा सरकारले ल्यायो पढ्दै-कमाउँदै कार्यक्रमको अवधारणा, के छ योजना ?
काठमाडौं । नेपालमा सरकारले विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’को अवधारणा ल्याएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा चालु आवको बजेटमै गरिएको थियो । सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ जारी गरेको हो ।
पुस २७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार जारी कार्यविधिमा शिक्षालाई सीपसँग जोड्नका लागि सामुदायिक विद्यालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्तावना तयार गरी स्थानीय तहमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावनाको मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले विद्यालयलाई अनुदान दिनेछ र अनुदानका आधारमा विद्यार्थीलाई पढ्दै, कमाउँदै अभियानमा सामेल गराइनेछ।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । वर्तमान सरकार बनेपछि त्यसमा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम‘ पूरक बजेटमार्फतबाट थपिएको हो । शुरुवातमा यो कार्यक्रम प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी लक्षित हुने गरि कार्यविधि बनेको छ ।